Ithegi: i-imeyile yemozulu ebangela | Martech Zone
Maka: i-imeyile yemozulu ebangela
U-Yesmail Wongeza iiMpawu ze-imeyile zangaphandle zeMidlalo neMozulu
NgoLwesibini, Oktobha 14, 2014 NgoLwesibini, Oktobha 14, 2014 Douglas Karr
Njengabathengisi, sihlala sicinga ngedatha yomthengi kunye nokuziphatha njengemihlaba emileyo njengobudala, ikhowudi yeposi, kunye nomnini khaya. Nangona kunjalo, siyaphoswa kukuhamba bukhoma kweziganeko ezenzeka kubomi babathengi. Iziganeko ezilula njengokutshintsha kwemozulu zinokutshintsha indlela yokuziphatha komthengi kunye nemikhwa yokuthenga. Ukuba ikhephu lisendleleni, umzekelo, sinokuthi sithengele amavili amatsha okanye i-snowblower kwindlela yethu yokuhamba. Ekujoliswe kuko, ngexesha elifanelekileyo,